भिटेन र पुलिसको मन मिलेपछि : जब प्रहरीले नै भिटेनको फ्यान भन्दै फोटो खिचाए ! - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com भिटेन र पुलिसको मन मिलेपछि : जब प्रहरीले नै भिटेनको फ्यान भन्दै फोटो खिचाए ! - खबर प्रवाह
भिटेन र पुलिसको मन मिलेपछि : जब प्रहरीले नै भिटेनको फ्यान भन्दै फोटो खिचाए !
र्‍यापर समीर घिसिङ उर्फ भिटेन र प्रहरीको सम्बन्ध कहिल्यै ‘हार्दिक’ रहेन । भिटेनलाई देखिनसहने प्रहरी र प्रहरीलाई देखिनसहने भिटेनले एकअर्कालाई सँधै आरोप-प्रत्यारोप गर्दै आइरहे ।
छाडा गीत गाएर समाज बिगारेको आरोप लगाउँदै प्रहरीले भिटेनलाई प’क्राउ मात्र गरेन, मुद्दा समेत चलायो । आइन्दा त्यस्तो नगर्ने सर्तमा उनी धरौटीमा समेत रिहा भए ।
गत महिना रिलिज भएको ट्रयाक ‘गल्ली सडक’ भिटेनले आफ्नै वास्तविक जीवनलाई गीतमा उतारेका थिए । सो गीतमा उनले राजनीतिक व्यवस्था र प्रहरीप्रति आक्रोश पोखेका थिए । उनका अधिकांश गीतमा प्रहरीलाई गाली गरिएका हुन्छन् ।
तर, प्रहरीभित्रै उनै भिटेनका फ्यान पनि प्रशस्तै रहेछन् । जुन दृश्य हालै उनले सेयर गरेका केही तस्बिरबाट पुष्टि हुन्छ । हालै एक कार्यक्रममा पुगेका भिटेनलाई प्रहरीले रोकेर फोटो समेत खिचाए । यो तस्बिर सामाजिक संजालमा भाइरल हुन बेर लागेन ।
सुरुआतदेखि नै पुलिसविरोधी गीत गाउँदै हिँड्ने भिटेनले अकस्मात पुलिससँगकै फोटो खिचाएर पोस्ट गर्दा स्वभाविक नहुने पनि भैहाल्यो । उनका फ्यानले भिटेनसँग यो तस्बिरको कारण सोधे र कतिपयले आश्चर्य पनि जनाएका छन् ।
उक्त तस्बिरको यथार्थबारे नेपाल प्रेसले भिटेनसँग जिज्ञासा राखेको थियो । जवाफमा भिटेनले एक कार्यक्रममा पुगेको बेला प्रहरीहरुले आफूसँग फोटो खिचाउन चाहेपछि खिचेको बताएका छन् । ‘सबै प्रहरी गलत हुनुहुन्न । असल प्रहरी दाजुहरु पनि हुनुहुन्छ । मैले सिस्टम र केही प्रवृत्तिलाई गीतमार्फत विरोध गरेको हुँ’ भिटेनले भने, ‘असल र राम्रो पुलिस फोर्स भए देशलाई पनि फाइदाको कुरा हो ।’
पछिल्लो गीत ‘गल्ली सडक’मा भिटेनको एउटा लाइन थियो : के फाइदा छ र मलाई बिग्रिसकेको समाज बिगारेर ?’ उनले कुन मुडमा यो गीत लेखे, उनैले जानून तर, भिटेन र प्रहरीको यो दोस्तीले पक्कै पनि फ्यानमाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
डाँडामा ५० करोड बढीका भ्यू टावर बनाउन आवश्यक छैन : झाँक्री
एमालेको नेतृत्व भष्मासुरको हातमा परेर ऐतिहासिक अवसरहरु गुम्यो : नेता खनाल
काठमाडौं । पत्रकार ऋषि धमला प्रश्न गर्ने शैली र हाउभाउले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा चिनिएको नाम हो। हाक्काहाक्की प्रश्न गर्ने र कार्यक्रमलाई कसरी हुन्छ रोचक बनाउनेमा उनको ध्यान हुन्छ।रिपोटर्स क्लब नेपालका सभापति, प्राइम टिभीका अध्यक्ष, नेपाली रेडियो नेटवर्कका अध्यक्ष र रिपोटर्स नेपाल डटकमका सञ्चालक तथा प्रधानसम्पादकका रुपमा क्रियाशील धमला ‘धमलाको हमला’ र ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ नामक […]
धमला पत्नी एलिजा गौतमको बोल्ड तस्बिर भाईरल
पत्रकार ऋषी धमला पत्नी एलिजा गौतम चलचित्र अनुरागबाट नेपाली फिल्ममा डेब्यु गरिन् । आफैले निर्माण उक्त फिल्म चल्न सकेन तर एलिजको चर्चा भने राम्रै भयो । १८ वर्षको उमेरमा उनले आफूभन्दा १७ वर्ष जेठा व्यक्तिसँग लगनगाँठो कसिन् । त्यसपछि उनी रंगिन दुनियाँमा लागेकी छन् । उनी सामाजिक संजालमा पनि निकै सक्रिय छन् । पछिल्लो समय […]
काठमाडौं । अहिलेकी व्यस्त मोडल गरिमा शर्माका विषयमा म्युजिक भिडियोको क्षेत्रमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुने गर्छन् । विभिन्न कारणले उनलाई कहिलेकाहीं विवादमा पनि ल्याउने गरेको छ । कहिले नायक पल शाहसँगको सम्बन्धको चर्चा त कहिले दुर्गेश थापासँगको टिकटक लाइभका कारण पनि उनी विवादमा आइन् । विज्ञापन म्युजिक भिडियो बजारमा फेरि अर्को एउटा चर्चा चलेको […]
रेखा थापाले विवाह गर्दै
नायिका रेखा थापाले आफू विवाह गर्ने तयारीमा रहेको बताएकी छन्। सिनेपाटीलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उनले आफूले मन पर्ने मानिस भेटिसकेको र चाँडै विवाह गर्ने बताएकी हुन्। ‘गर्छु डिफेनेट्ली गर्छु विवाहको एगेन्समा म होइन, मलाई लाग्छ एउटा पुरुषबिना नारी र नारीबिना पुरुष अपूरो हुन्छ, यो सृष्टि चलाउनलाई पनि र एकअर्काको सारथिका हिसाबले पनि’, नायिका थापाले भनेकी छन्, […]